खरिपाटीमा पत्रकार र प्रहरीबीच तनाव, रासस र नेपाल टेलिभिजन बाहेक अन्य मिडियालाई निषेध !
भक्तपुर – सरकारले चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागेको नेपाली विद्यार्थीलाई राख्ने स्थानको व्यवस्थापन र तयारी पुरा भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट शनिबार राती ल्याउने तैयारी गरिरहेको छ ।
नेपालीहरुलाई १५ दिनसम्म राख्नका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाईन निर्माणदेखि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यबस्थापन कार्यानवयन काठमाण्डौंका सहसचिव कुमार घिमिरेले भवन बाहेक सम्पूर्ण नयाँ संरचनाको व्यबस्था गरि तयारी पुरा गरेको जानकारी दिए ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले सुरक्षादेखि सरसफाईसम्मका पूर्वाधार व्यबस्थापनमा सघाऊ पुर्याउदै ६ दिनभित्र सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको उनले बताए ।
नेपालीलाई लिन नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनतर्फ शुक्रबार अपरान्ह उडेको बिमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमान आइतबार बिहानै त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने छ । शुक्रबार क्वारेन्टाइनमा राख्न तयार गर्नुअघि सरकारले रिहर्सल गरेको थियो ।
भवनहरु मध्ये ब्लक ए मा ८६, ब्लक बि मा ८९ र ब्लक सि मा २५ जना गरि कूल २०० जना क्षमता रहेको क्वारेन्टाईन तयार पारेको मन्त्रालयका अन्तर्गत संघीय सचिवालयका उपसचिव विदुर खड्काले जानकारी दिए ।
क्वारेन्टाईनमा रहदाँ अभिभावकहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा भेटघाट गर्न पाइने छैन भने क्वारेनटाईन अगाडि अभिभावकलाई प्रत्येक दिन यहाँको अबस्थाबारे जानकारी गराउने व्यबस्था गरिएको छ । पत्रकारका लागि क्वारेन्टाईन बाहिर संचारकर्मी कक्षको व्यबस्था गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्दै आईशोलेसन वार्डमा हुने जतिकै सुविधा सहितका व्यबस्था गर्दै भवनमा रंगरोगन, गार्डेन निर्माण, भौतिक संरचना एवं विद्युतीयदेखि स्यानेटेरीसम्मको मर्मत सम्भार, सुत्ने बेडदेखि दैनिक उपयोग सम्पूर्ण नयाँ सामानहरुको व्यबस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले कोरोना भाईरसको संक्रमण नभएका, स्वस्थ्य व्यक्तिलाई ल्याएर १५ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वस्थ्य प्रमाणित भएपछि घर फर्काउने भएकाले नआत्तिन र त्रासमा नरहन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका सचिव नाराणप्रसाद विडारीले आग्रह गरे ।
क्वारेन्टाइनमा संक्रमण फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाईएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर बासुदेव पाण्डेले बताए । चीनबाट ल्याईने नेपालीमा भाईरसको संक्रमण नहुने दाबी गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार क्वारेन्टाईनमा राख्नु पर्ने भएकाले यस्तो व्यबस्था गरिएको बताए ।
यसअघि चाँगुनारायण नगरपालिका वडा न. ६ नगरकोट वडा कार्यालय नजिक रहेको खानेपानी कार्यालयमा शुक्रबार प्रहरी र स्थानिय्वासीका बिच झडप भएको थियो । स्थानीयले एक सातादेखि बिरोध गर्दै आएको र बिरोध जारी रहेको नगरकोटका धनबहादुर लामाले बताए । स्थानीयवासीले सरकारले जनचेतना र स्थानीयलाई बिश्वस्त तुल्याउनुको साटो दमन गर्न खोजेको बिरोधमा सरकार र जनप्रतिनिधिको बिरोध समेत गरेका छन् ।
संचारकर्मीले सरकारको तयारीका बारेमा जानकारी दिन पनि तस्विर र भिडियो आवश्यक छ भनेर माग गर्दा पनि रोक लगाईएको थियो । संचारकर्मीलाई रोक लगाएको र प्रवेशमा निषेध गर्दै अभद्र व्यबहार गर्नु खेदजन्य रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीले बताए ।
उनले भने–“संचारकर्मीले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति कहिले गर्ने ? जनताले कस्तो ठाउँमा चीनबाट ल्याईएकालाई राखिदै छ भन्ने जानकारी दिनुको सट्टा उल्टै लुकाउने काम गरेको छ, यसले सरकारको तयारीबारे शंका जन्माएको छ ।” सुरक्षाकर्मीले संचारकर्मी माथि गरेको अभद्र व्यबहारको संचारकर्मीहरुले बिरोध गरेका थिए ।
प्रहरीले पत्रकारलाई समाचार सम्प्रेषणमा ब्यबधान गर्न खोजेपछि पत्रकार र प्रहरीबीच केहीबेर तनाव भएको थियो ।शनिबार पनि पत्रकार महासंघ भक्तपुर र संचारकर्मीको दबाबका बाबजुद रासस र नेपाल टेलिभिजनका संचारकर्मीलाई मात्र क्वारेन्टाईनस्थलमा छिर्न दिईएको छ । अन्य मुलधारका संचारगृहका संचारकर्मीलाई निषेध गरिएको छ ।